ကြိုတင် အကြောင်းကြားခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြိုတင် အကြောင်းကြားခြင်း
Posted by မောင် ပေ on Jun 2, 2011 in Copy/Paste | 12 comments
mg တွင်ရယ်ရသော ဟာသလေး များ ကို ဖတ်ရပါသည် ။ ထိုအခါ ကျွန်တော် လည်း ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးသော ဟာသလေးများ ကို ဖောက်သည် ပြန်ချ ရန် စိတ်ကူး မိပါသည် ။ ကျွန်တော် တင်မည့် ဟာသများ မှာ ဆရာ မောင်ကောင်းထိုက် ( နှီးပဒေါ ) ၏ ဟာသပဒေသာ စာအုပ်များ မှ ဖြစ်ကြောင်း တင်ကြို ၀န်ခံ လိုက်ပါသည် ။
ကြိုတင်ရေးပြမဲ့ အစား ပိုစ်တင်တဲ့ အခါ.. အောက်ဆုံးမှာ မှတ်ချက်ဆိုပြီး စာအုပ်နာမည် ရေးပေးတာ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒီပိုစ်ကို အခု ဖတ်ရတဲ့ လူ ရှိပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ပိုစ်တင်တဲ့ အခါ ဖတ်တဲ့လူက ဒီပိုစ် တင်ပြီး ပြောထားတာ သိချင်မှ သိမယ်လေ။
မှတ်ချက် ဆိုပြီး စာတကြောင်း ထည့်ပေးတာ ပိုကောင်းမည်ဟု ထင်ပါသည်။
ဟုတ် ကျေးဇူးပဲဗျာ အဲဒီလို ပဲ လုပ်မယ်
When will u write?
ဆရာ မောင်ကောင်းထိုက် ( နှီးပဒေါ ) ရဲ့ ဟာသ စာအုပ်အတွဲ ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ အထိ ဖတ်ဖူးတယ် ။ ဖရီးဒေါင်းလော့လုပ်ထားတာ
၂၂ အထိ ဖတ်ဖူးပါတယ် ။ စာအုပ် ဆိုင် က ငှားဖတ်တာ ။ ဟာသပဒေသာ အတွဲ တွေ အပြင် အခြား ဟာသ အရှည်လေး များ ကို စုစည်းထုတ်ထားတဲ့ ဆရာမောင်ကောင်းထိုက် စာအုပ်များလည်း ရှိတယ် ။
ဆက်ဖတ်မလို့ဟာ။ စာက အကြောင်းကြားတာနဲ့ပြီးသွားတယ်….
ဟုတ် ခက်ခက်ခဲခဲ ဆိုတာ ဆရာ မောင်ကောင်းထိုက် ဟာ ပါ ခင်ဗျာ ။ ဆရာ့ ဟာသ တွေ ကို ခပ်တည်တည် နဲ့ နာမည်တွေ ပြောင်းပြီး ကျွန်တော် ပဲ စဉ်းစားပြီး ရေးထားသလို မလုပ်တတ်လို့ ပါ ။ ရေး က လဲ ရေးချင်လွန်းတော့ ကြိုတင် ဝန်ခံ လိုက်တာပါ ။ အပေါ်မှာ ဆူး ပြောထားသလို မျိုး လေး အောက်ကနေ မှတ်ချက် ဆိုတာ ထည့်ပြီး ဆက်တိုက် ရေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ။ လောလောဆယ် တော့ သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ အတွက် အလုပ် သို့ ပြန်လုပ်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း ။ အားလုံး ကို ငါးစားပါသည် ။ ငါးစားလျှင် ဥာဏ်ကောင်းသည် ဟု မည်သူမှန်း မသိ ပြောဖူးပါသဖြင့် ။ ပင်လယ်ငါး စားမှ ဥာဏ်ကောင်း သည် ဟု ဆိုလျှင်လည်း ပင်လယ်ငါး မရသေးခင် ချောင်းငါး ခဏ စားမည် ။ မြောင်းငါး တော့ မစားပါ ။
ခေတ်မှီသူတိုင်း ပင်လယ်ငါးစားကြသည်..ဆိုတာ..သိန်းဖေမြင့်ရေးတာလို့ မှတ်မိတယ်..။
စစ်ပြီးခေတ်က.. မြန်မာတွေပင်လယ်ငါးမစားလို့. စားကြအောင်…တိုက်တွန်းတဲ့..ဆောင်ပုဒ်ဆိုပါတော့…။
မြန်မာတွေ.. ပင်လယ်ငါးစားအောင်.. သိန်းဖေမြင့်က စတိုက်တွန်းတယ်တောင် ဆိုရမယ်ထင်တယ်..။
အသား-ငါးစားရင်..ဥာဏ်ကောင်းပါတယ်..။ ဦးနှောက်ဖွံ့ ဖြိုးစေတဲ့ဓါတ်တွေပါပါတယ်..။
ငါးမှာတော့ ..အဲဒါမျိုးဓါတ်တွေ…ပိုပါတယ်ပြောကြတာပဲ..။ (ဟုတ်မဟုတ်… ဆရာဝန်တွေ ဆက်ပြောပေါ့)
ပင်လယ်ငါးကတော့.. မြန်မာပြည်မှာ ဈေးသက်သာတာမို့ .. ဈေးပေါပြီး အဟာရဖြစ်တာမို့ .. ပိုစားသင့်ကြတယ်ပေါ့…။
ရန်ကုန်ရေမြောင်းတွေမှာ.. ဒေါင်းငါးဆိုတဲ့. ငါးလှလှလေးတွေလည်းပေါတယ်..။
အဲဒီကောင်လေးတွေ (မြောင်းငါး)တွေက… နိုင်ဂံဂျား.. အလှမွေးငါးဆိုပြီး ..တင်ပို့ လို့ရတယ်..။
ဘယ်ဒူတွေ ပြောဒါလဲကွ ပင်လယ်ငါး ဂ ဈေးပေါဒယ်ဆိုဒါ။ အကုန် export ဖြစ်ပြီး ဈေးကြီးနေဒါ။
ရေးမှာကတော့ဟာသလို့ပြောတာဘဲ ဓာတ်ပုံကတော့ ခပ်မိုက်မိုက်နော် …..
ကိုဖက်တီး အနေ နဲ့ ရုပ်ရှင် ဗီဒီယို သိပ်မကြည့်ဖြစ်လို့ နေပါလိမ့်မယ် ဗျာ ။ ကျွန်တော် တင်ထား တဲ့ profile picture က three stooges ဟာသ ၃ ယောက် ရုပ်ရှင်ထဲ က MOE ရဲ့ ပုံပါ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။